Salaan sanad cusub | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraSannad cusub waad salaaman tihiin
03 / 01 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, HAY'ADAHA, Headline, TURKEY, TCDD
Maareeyaha Guud ee TCDD Ali İhsan Uygun maqaalka cinwaankiisu yahay 'Merhaba Hello to Sannadka Cusub Ra' waxaa lagu daabacay joornaalka Raillife ee Janaayo 2020.
Sannadka cusub micnaheedu waa hadafyo cusub iyo farax gelin cusub.
Sannad guulo leh kadib, 2020 waxay noqon doontaa sannad aan ku qaadno tallaabooyin muhiim ah mashaariic badan oo muhiim ah.
Suuqyada kobaca iyo kordhinta baaxadda ganacsiga caalamiga ah ayaa sidoo kale saameyn ku leh horumarinta waaxda tareenka waxayna u baahan yihiin dadaallo cusub iyo maalgashi ballaaran.
Somut One Generation iyo One Road project olan, oo gacan ka geysan doona mustaqbalka gaadiidka Eurasia, ayaa ah tusaalaha ugu macquulsan ee qaabkan. Booqashada Shiinaha qeybtii labaad ee Diseembar 2019, waxaan gogol dhig u fidinnay xiriirada ganacsi ee aad muhiim ugu ah dalkeenna gadiidka tareenka. Waxaan sii wadi doonnaa howlaheena ganacsi ee gaadiidleyda kuwaas oo wax ugu biirin doona dhaqaalaheena anaga oo aan gaabin.
Markaan tixgalinayno gaadiidka tareenka ee aragtidan, mashruucyadeenna xawaaraha-xawaaraha ee xawaareyn doona bariga iyo galbeedka dalkeenna waxay nagu dhiirigelinayaan inaan mustaqbalka u soconno rajo iyo go'aan.
Waxaan ku gaadhnay 95% horumarka jireed dhismaha kaabayaasha Ankara-Sivas YHT. Waxaan bilaabi doonnaa waditaannada tijaabada maalmaha soo socda waxaanna bilownaa hawlgalka qeybta hore ee 2020. Sidaa darteed, waxaan yareyn doonaa gaadiidka xadiidka u dhexeeya labada magaalo laga bilaabo 12 saacadood illaa 2 saacadood.
Intaas waxaa sii dheer, howlaheena dhismaha waxay kusii socdaan dhammaan qeybaha tareenka xawaaraha sare ee Ankara-İzmir. Waxaan higsaneynaa inaan dhameystirno qeybta Polatlı-Afyonkarahisar dhamaadka 2021 iyo qeybta 'Afyonkarahisar-İzmir dhamaadka 2022. Markaa, waxaan ka yaraynaynaa waqtiga safarka tareenka ee u dhexeeya Ankara iyo Izmir laga bilaabo 14 saacadood illaa 3 saacadood iyo 30 daqiiqo.
Waxaan rajeynayaa in sanadka 2020 uu waxtar u yeelan doono umaddeena, dalkeena iyo jidkeena tareenka.
Fursadaha ka yimaada diyaaradaha Pegasus
Ku kalsoonow qaybta ka jirta ISAF SHF Fair
Yusuf SUNBÜL: Hello Rayidka
Ku salaaman wadada birta xariir
Mashruuca Cusub ee Cusbitaalka Cusub
Ankara - Sincan Mashruuca Dhismaha Xariiqda ee Newcan wuxuu ku yaal agagaarka de jira ee jira
Nasiib daro ka timid Uludağ
Joornaalka Raillife ee January 2020